TinyLetter: No Frills Email Akwụkwọ Akụkọ | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 23, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Banye na ndị na-eweta ọrụ email ọ bụla n'oge a, ma ọ bụrụ na ị maghị nka na ụzụ, ị nwere ike gafere na menu, atụmatụ, arụmọrụ, jargon na mkpesa. Mgbe ụfọdụ, anwansi nke teknụzụ bụ mgbe onye ọ bụla chegharịrị na usoro ahụ ma mee ka ngwa ahụ naanị ihe ndị dị mkpa.
Akwụkwọ ozi bụ ọrụ dị otú ahụ.
Chepụta peeji ịdenye aha gị. Signdị ntinye aka mara mma ma dịkwa mfe idezi, yabụ ị nwere ike ime TinyLetter nke gị.
Ide na zipu TinyLetter gị. Enweghị ndebiri ọ bụla iji nyere gị nsogbu. Otu Pịa, ị pụọ. Ọbụna anyị ga-edozi nha ihu na akara dị elu na ngwaọrụ mkpanaka ka akwụkwọ ozi gị na-adịkarị mma.
Zaghachi ndị na-agụ akwụkwọ gị.
Hụ onye na-agụ akwụkwọ akụkọ gị, ma gaa n'ihu na mkparịta ụka ahụ na ndị nabatara ya.
Ọ bụ ya! Enwere kọntaktị nke kọntaktị 2,000 kwa akwụkwọ akụkọ - yabụ etinyere sistemu maka ojiji nkeonwe. Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, ịkwesịrị ịkwaga! TinyLetter nwere nke Mailchimp.
Tags: email Marketingakwụkwọ ozi emailobere obere ihe
Jikwaa PDF Creation Process gị na WebMerge